Aretina Soavaly | Soavaly Noti
ny aretin'ny soavaly Mety hampidi-doza tokoa izy ireo, satria toy ny olombelona dia afaka mamarana ny ain'ny biby ao anatin'ny fotoana fohy. Ny fampahalalana rehetra azontsika atao dia tsara foana, indrindra raha manampy antsika hisoroka ny faharatsiana lehibe kokoa izy io, na dia lojika aza, ny zavatra voalohany tokony hatao raha misy fanairana dia mampandre ny mpitsabo biby anay natoky ny handinika ilay biby ho antsika.
Ao amin'ity habakabaka ity no hahitanao, ho fampahalalana, torohevitra ary antsipiriany hafa mba hanasitranana na hisorohana ny aretina mahazo ny soavalintsika. Anisan'ireo aretina soavaly tokony ho fantatra ny colic na laminitis Ankoatra ny hafa, ho hitanao eto daholo izy ireo hanitatra ny mombamomba anao.
Ny soavaly dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo biby izay mifandray akaiky amin'ny olona indrindra. Ity biby ity dia manana ...
Inona no allergy sy aretina tampoka amin'ny soavaly?
Tsy mahagaga raha, indraindray, ny vavan'ny soavaly dia mikitroka matetika, indraindray mifanohitra amin'izay zavatra mety hitranga. Is…
Ny antony mahavery soavaly soavaly
Matetika ny soavaly dia mandatsaka ny volony mandritra ny ririnina. Na dia tena very aza ny fatiantoka ...
Virosy tazo Nile amin'ny soavaly
Ny tazo nile amin'ny soavaly dia aretina viralin'ny aretin-kozatra antsoina hoe ...
Ny tsy fahampian'ny homamiadana na ny tazo mando
Ny tsy fahampian-dra miteraka haben'ny soavaly dia ateraky ny viriosy iray ao amin'ny fianakaviana retroviridae. Mitohy ny fivoarany ...
Sakano ny colika mitovy
Araka ny antontan'isa, soavaly efatra amin'ny isan-jatony no voan'ny colic equine, izay sokajiana ho aretina lehibe miantraika amin'ny ...
Ny tsy fahampian-dra amin'ny soavaly
Ny tsy fahampian'ny otrikaretina amin'ny soavaly, fantatra amin'ny anarana hoe anemia tsy mitovy amin'ny equine, dia aretina viralin'ny soritr'aretina dia: ...
Inona ny sporotrichosis amin'ny soavaly?
Aretin-koditra ateraky ny holatra poizina tena izy, hita amin'ny natiora na ...
Olana amin'ny hazondamosin'ny soavaly
Misy fitsaboana izay manatsara ny olana ara-pitaintainana ao amin'ny hazondamosin-tsoavaly, teknika voajanahary sy fomba hafa amin'ny ...
Kitapo izay mamindra soavaly
Ny iray amin'ireo aretina mety hisy fiatraikany amin'ny soavaly amin'ny hoditra dia avy amin'ny tsimok'aretina sy mikraoba ...
Mangatsiaka koa ny soavaly
Rehefa tonga ny hatsiaka dia mahazo sery ny soavaly, dia aretina mahazatra tsotra io ary tsy tokony hanome ...
Ny soavaly koa dia manana aretina mahafaty
Aretina manaikitra soavaly
Stereotypes amin'ny soavaly (I)
Fihetsiketsehana amin'ny soavaly